November 1, 2021 - News
ထန်တလန်မြို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး ချက်ကျလက်ကျနဲ့ အရှိုက်ထိအောင်ရေးသားလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
zawgyi ထန္တလန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ခ်က္က်လက္က်နဲ႔ အရႈိက္ထိေအာင္ေရးသားလာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသု ဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံေတာ့ လက္ရွိမွာျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဝရံထုတ္ခံထားရေပမဲ့လည္း ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ အၿမဲတမ္းတက္ႂကြစြာပါဝင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း ေဝဖန္ခံရမႈေတြတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ မဆုတ္ဘဲ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ရွိေနေပးလို႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္‌ေတြကို ရယူထားႏိုင္သူေလးျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုကပီျပင္လြန္းတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔က်ရာဇာတ္ေကာင္ေတြမွာအေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားတဲ့အကယ္ဒမီမင္းသမီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္ၿဖိဳးသုကဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔လက္ထက္ထိမ္းျမားထားၿပီးေတာ့သာယာၿပီးေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့မိသားစုဘဝေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာလဲျပည္သူေတြနဲ႔ အတူလမ္းထြက္ကာလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာအားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅ကနဲ႔မတရားအမႈဖြင့္ခံရထားၿပီးေဘးကင္းရာကိုတိမ္းေရွာင္ေနရပါတယ္၊တိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္းမွာလဲလူမႉကြန္ယက္ကေနျပည္သူမ်ားအတြက္ခြန္အားျဖစ္ေစမယ့္ စာသားေတြကိုေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ […]
မင်းသားကြီးဒွေးရဲ့သမီးလေးကို မင်းသမီးအဖြစ် ပွဲထုတ်မည့် ဒါရိုက်တာ သားညီ
သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒြးရဲ႕သမီးေလးကိုမင္းသမီးအျဖစ္ပြဲထုတ္မည့္ဒါ႐ိုက္တာသားညီ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒြးကေတာ့တသ္ေခတ္တစ္ခါကေအာင္ျမက္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အျပင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေပမယ့္လဲယေန႔ထိသ႐ုပ္ေဆာင္ေဒြးရဲ႕ပရိတ္သတ္မ်ားကအမွတ္ရသတိရေနၾကဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့ဒါ႐ိုက္တာသားညီကသ႐ုပ္ေဆာင္ေဒြးရဲ႕သမီးေလးကိုမင္းသမီးအျဖစ္ပြဲထုတ္မည့္အေၾကာင္းကိုလဲအခုလိုေျပာၾကားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဒြးရဲ႕သမီးေလးျဖစ္သူဆည္းလည္းကို၊အျခားမဲ့၌၊ဇာတ္လမ္းတြဲမွာေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးတစ္လက္အေနနဲ႔ပြဲထုတ္႐ိုက္ကူးမယ့္အေၾကာင္းကိုဒါ႐ိုက္တာသားညီကေျပာလာခဲ့ပါတယ္၊​စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ credit original writer unicode သရုပ်ဆောင်ဒွေးရဲ့သမီးလေးကိုမင်းသမီးအဖြစ်ပွဲထုတ်မည့်ဒါရိုက်တာသားညီ သရုပ်ဆောင်ဒွေးကတော့တသ်ခေတ်တစ်ခါကအောင်မြက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမယ့်လဲယနေ့ထိသရုပ်ဆောင်ဒွေးရဲ့ပရိတ်သတ်များကအမှတ်ရသတိရနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဒါရိုက်တာသားညီကသရုပ်ဆောင်ဒွေးရဲ့သမီးလေးကိုမင်းသမီးအဖြစ်ပွဲထုတ်မည့်အကြောင်းကိုလဲအခုလိုပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်နော် သရုပ်ဆောင်ဒွေးရဲ့သမီးလေးဖြစ်သူဆည်းလည်းကို၊အခြားမဲ့၌၊ဇာတ်လမ်းတွဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ပွဲထုတ်ရိုက်ကူးမယ့်အကြောင်းကိုဒါရိုက်တာသားညီကပြောလာခဲ့ပါတယ်၊​စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ credit original writer
သမီးက ကလေးရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က ၁၆ နှစ်မလေး
zawgyi သမီးက ကေလးရွိေသးတယ္ ဆိုတဲ့ KTV က ၁၆ ႏွစ္မေလး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိေကတီဗီဆိုင္တြင္ အသက္ ၅၀နည္းပါးရွိ ေဘာစိလူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အသက္၁၆ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ ေကတီဗီမယ္ေလးအား ခ်စ္ေရးပန္ကာလက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းဆိုတယ္ ေကာင္မေလးကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆိုေနတာေပါ့ ”ဦးရယ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ခုမီးက…ခေလးရွိေသးတယ္” ေဘာစိ ဦးေလးႀကီးလည္း” မီးကိုသာရမယ္ဆို ဘယ္ပုဒ္မေတြမဆို […]
မိႏ္းေကလး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ (အုိး) တင္ ၊ ရင္ ေၾတၾကည့္ၿပီး အပ္ိဳစစ္ လား? မစစႅား? ေဝဖႏ္ေနၾကတဲ့ တစၡ္ိဳ႕ လူေၾတ ဖတၹဳိ႔
zawgyi မိႏ္းေကလး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ (အုိး) တင္ ၊ ရင္ ေၾတၾကည့္ၿပီး အပ္ိဳစစ္ လား? မစစႅား? ေဝဖႏ္ေနၾကတဲ့ တစၡ္ိဳ႕ လူေၾတ ဖတၹဳိ႔ ေယာက္္ားဆိုတာ မယုတၼာ ဖို႔ပဲ လိုတာပါ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ တင္ ရင္ ေၾတၾကည့္ၿပီးအပ္ိဳစစႅား […]
အရပ်ပုပြီး အဝလွန်နေတာကြောင့် ရည်းစားကောင်လေးမှ ထားသွားကာ စိတ်နာနာနှင့် ဝိတ်ချပြီး အလှဆုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲခဲ့သည့် မိန်းကလေး
အချစ်စစ်မှာ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင် ပကာသနမရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် ရုပ်လှမှသာလျှင် ချစ်သူရည်းစားတော်ချင်ကြတာများသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးသည် ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၁၆၅ပေါင်ရှိပြီး အရပ်အမောင်းအားဖြင့် ၅ပေ၃လက်မသာရှိ၍ အပေါင်းအသင်းလုပ်မည့်သူပင်မရှိပဲ ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းတွေကိုသာ ခံခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ် မိန်းကလေးအား ဖက်တီးမလေးကိုမှ ချစ်တာဆိုပြီး ချစ်ရေးဆိုခဲ့သော သက်တူရွယ်တူကောင်လေးတစ်ဦးနှင့် အချိန်တော်ကြာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး […]
ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ MRTV ရဲ့ ဗရမ်းဗတာဖျော်ဖြေပွဲကို သွားရောက်ခဲ့သော တပ်ချစ်သူမမ မယ်လိုဒီအကယ်ဒမီ မေမေမယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိ ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ မယ်လိုဒီက မကြာသေးခင်ကာလတုန်းက အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်သားလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ Single mother […]
အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအား ခွင့်တောင်းနေခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး
Qatar နိုင်ငံ Hamad အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ အခြားတစ်ဖက်ဂိတ်ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ သူမရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူအား နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောနိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအားခွင့်တောင်းနေခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာ Twitter မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲ၌ အနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ချစ်စရာကလေးမလေးတစ်ဦးဟာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဆီသို့ရောက်လာတဲ့အခါခဏရပ်ကြည့်ပြီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက ဘယ်သွားမှာလဲလို့မေးလိုက်တော့ ချစ်စဖွယ်ကလေးမလေးက အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့သူမရဲ့အဒေါ် အား လက်လေးဖြင့်ညွှန်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက ခေါင်းညိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကလေးမလေးဟာ သူ့အဒေါ်ဆီဦးတည်ပြေးသွားခဲ့ပြီး […]
မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်ဖို့အတွက် အကြိမ်ပေါင်း ၁၇၂ ကြိမ်လောက် အကိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ လူသား
zawgyi ခုတစ္ေခါက္မွာ‌ေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ ေႁမြဆိပ္အမ်ားဆုံး ထုတ္ၿပီး လူေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳခဲ့တဲ့ Bill ​Haast ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အ​ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ Bill Haast ဟာ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Bill Haast […]
ဝက်အရုပ်လိုဝတ်စုံဝတ်ပြီး ပန်ကိတ်များကို ရောင်းကာ ဆီးချိုရောဂါခံစားရတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shandong ပြည်နယ်၊ Jining မြို့မှ Zhou အမည်ရှိ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ Jian Bing ရောင်းတဲ့ Peppa Pig ကာတွန်းဝတ်စုံကို ဝတ်ပြီး (၁၀) နှစ်အရွယ်သမီးအကြီးဆုံးနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ပန်ကိတ်များကို ရောင်းချကာ အသည်းအသန်ဖျားနေတဲ့ အခြားသမီးအတွက် ငွေရှာရန် […]
သက်ရှိလူသားလို့တောင် ထင်သွားစေမယ့် လူသားမဟုတ်သော ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပုံစံ စက်ရုပ်မလေး Imma
နည်းပညာတိုးတတ်လာသည်နှင့်အမျှ အရာရာတိုင်းဟာ တိုးတတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံတွေမှာလည်း လူသားအစား စက်ရုပ်တွေကို ပိုပြီး အသုံးပြုလာကြသည်ကို တွေ့ရမှာပါ။ အပြင်လောကမှာလည်း မိန်းကလေးမော်ဒယ်တွေကို စက်ရုပ်တွေနဲ့ ဖန်တီးလာကြပါတယ်။ ၎င်း စက်ရုပ်တွေဟာ တကယ့်သက်ရှိလူသားနဲ့ ခွဲခြားလို့မရအောင် ပီပြင်လွန်းလှပါတယ်။ ယခုအခါမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ Modeling Cafe ကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ဖန်တီးထားသော Imma […]